ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ပြည်ပတင်ပို့နိုင်ဖို့ အိန္ဒိယ မျှော်လင့်
နယူးဒေလီမြို့မှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးနေတဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတဦး။ (စက်တင်ဘာ ၁၅၊ ၂၀၂၁)
ဒီနှစ် အစောပိုင်းတုန်းက ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တင်ပို့ရောင်းချမှု ရပ်နားထားခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယနိုင်ငံဟာ အခုဆိုရင် ကာကွယ်ဆေး ထုတ်လုပ်မှုနှုန်းကို ခပ်သွက်သွက်နဲ့ လုပ်ငန်းတိုးချဲ့ လုပ်နေပြီး မကြာခင်မှာ ကမ္ဘာ့နိုင်ငံတွေကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ပြန်လည်တင်ပို့နိုင်လိမ့်မယ်လို့ မျှော်လင့်ရပါတယ်။ တဖက်မှာလည်း လာမယ့်လတွေအတွင်း နိုင်ငံတွင်းက အသက်ရွယ်ရောက်ပြီးသူတွေကို ကာကွယ်ဆေး ထိုးပေးဖို့ ပြင်ဆင်နေပါတယ်။
လာမယ့် ဒီဇင်ဘာလကုန်ပိုင်းအထိ အိန္ဒိယနိုင်ငံတွင်းမှာ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး ၁.၈၅ ဘီလျံ ထိုးနှံပြီးစီးရေး ရည်မှန်းထားပြီး အဲဒီနောက်ပိုင်းမှာ နိုင်ငံခြားကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ တင်ပို့သွားဖို့ အစိုးရက ခွင့်ပြုမှာဖြစ်ကြောင်း အိန္ဒိယ ကာကွယ်ဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉ်ရဲ့ နည်းပညာအကြံပေးအဖွဲ့ အကြီးအကဲ N.K. Arora က ဗွီအိုအေကို ပြောပါတယ်။ ရှေ့နှစ်ထဲမှာ ကာကွယ်ဆေး ဘီလျံပေါင်းများစွာ ဆက်ပြီး ထုတ်လုပ်နိုင်မှာ ဖြစ်တယ်လို့လည်း သူကဆိုပါတယ်။
တကယ်တော့ အိန္ဒိယဟာ ကာကွယ်ဆေး အမြောက်အမြား ထုတ်လုပ်တဲ့နိုင်ငံဖြစ်ပြီး ကမ္ဘာ့ဖွံ့ဖြိုးဆဲနိုင်ငံတွေကို တင်ပို့ ရောင်းချနေတာပါ။ နိုင်ငံပေါင်း ၁၀၀ နီးပါးကို ကာကွယ်ဆေး ၆၆ သန်းလောက် ဖြန့်ဝေ တင်ပို့ခဲ့တဲ့ အိန္ဒိယဟာ ကိုဗစ်ဒုတိယလှိုင်း ကြုံခဲ့ရပြီးနောက် နိုင်ငံခြားကို ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေး တင်ပို့မှုကို ဧပြီလထဲ ရပ်ဆိုင်းခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။
အိန္ဒိယအနေနဲ့ ကိုဗစ်ကာကွယ်ဆေးတွေ ဘယ်အချိန်မှာ စပြီး ပြန်လည်တင်ပို့မယ် ဆိုတာကိုတော့ အစိုးရတာဝန်ရှိသူတွေ အတိအကျ ပြောဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။
ကိုဗဈကာကှယျဆေး ပွညျပတငျပို့နိုငျဖို့ အိန်ဒိယ မြှျောလငျ့
ဒီနှဈ အစောပိုငျးတုနျးက ကိုဗဈကာကှယျဆေး တငျပို့ရောငျးခမြှု ရပျနားထားခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယနိုငျငံဟာ အခုဆိုရငျ ကာကှယျဆေး ထုတျလုပျမှုနှုနျးကို ခပျသှကျသှကျနဲ့ လုပျငနျးတိုးခြဲ့ လုပျနပွေီး မကွာခငျမှာ ကမ်ဘာ့နိုငျငံတှကေို ကိုဗဈကာကှယျဆေး ပွနျလညျတငျပို့နိုငျလိမျ့မယျလို့ မြှျောလငျ့ရပါတယျ။ တဖကျမှာလညျး လာမယျ့လတှအေတှငျး နိုငျငံတှငျးက အသကျရှယျရောကျပွီးသူတှကေို ကာကှယျဆေး ထိုးပေးဖို့ ပွငျဆငျနပေါတယျ။
လာမယျ့ ဒီဇငျဘာလကုနျပိုငျးအထိ အိန်ဒိယနိုငျငံတှငျးမှာ ကိုဗဈကာကှယျဆေး ၁.၈၅ ဘီလြံ ထိုးနှံပွီးစီးရေး ရညျမှနျးထားပွီး အဲဒီနောကျပိုငျးမှာ နိုငျငံခွားကို ကိုဗဈကာကှယျဆေးတှေ တငျပို့သှားဖို့ အစိုးရက ခှငျ့ပွုမှာဖွဈကွောငျး အိန်ဒိယ ကာကှယျဆေးထိုးနှံရေး အစီအစဉျရဲ့ နညျးပညာအကွံပေးအဖှဲ့ အကွီးအကဲ N.K. Arora က ဗှီအိုအကေို ပွောပါတယျ။ ရှနှေ့ဈထဲမှာ ကာကှယျဆေး ဘီလြံပေါငျးမြားစှာ ဆကျပွီး ထုတျလုပျနိုငျမှာ ဖွဈတယျလို့လညျး သူကဆိုပါတယျ။
တကယျတော့ အိန်ဒိယဟာ ကာကှယျဆေး အမွောကျအမွား ထုတျလုပျတဲ့နိုငျငံဖွဈပွီး ကမ်ဘာ့ဖှံ့ဖွိုးဆဲနိုငျငံတှကေို တငျပို့ ရောငျးခနြတောပါ။ နိုငျငံပေါငျး ၁၀၀ နီးပါးကို ကာကှယျဆေး ၆၆ သနျးလောကျ ဖွနျ့ဝေ တငျပို့ခဲ့တဲ့ အိန်ဒိယဟာ ကိုဗဈဒုတိယလှိုငျး ကွုံခဲ့ရပွီးနောကျ နိုငျငံခွားကို ကိုဗဈကာကှယျဆေး တငျပို့မှုကို ဧပွီလထဲ ရပျဆိုငျးခဲ့တာ ဖွဈပါတယျ။
အိန်ဒိယအနနေဲ့ ကိုဗဈကာကှယျဆေးတှေ ဘယျအခြိနျမှာ စပွီး ပွနျလညျတငျပို့မယျ ဆိုတာကိုတော့ အစိုးရတာဝနျရှိသူတှေ အတိအကြ ပွောဆိုတာ မရှိသေးပါဘူး။
အိန္ဒိယမှာ တရက်အတွင်း ကာကွယ်ဆေး ၁၀ သန်း ထိုးပေးနိုင်ခဲ့